မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရသက်တမ်း နှစ်နှစ်ကျော်တွင် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သိမ်းဆည်းခဲ့ရသည်?? - Yangon Media Group
မကွေး၊ သြဂုတ် ၁၇
အစိုးရသက်တမ်း နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သိမ်းဆည်းလယ်ယာမြေနှင့် အ ခြားမြေဧက ၃၉ဝဝ ကျော်ကိုပြန် လည်စွန့်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး ဦးဝင်းမော်ဌေးက သြဂုတ် ၁၆ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
”မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သိမ်းဆည်းခံရတဲ့လယ်ယာ မြေနဲ့အခြားမြေထဲက ၃၉၁၃ ဒသမ ၃၉၃ ဧကကိုကျွန်တော်တို့ အစိုးရလက်ထက်မှာပြန်လည်စွန့်လွှတ်ပြီးပါပြီ။ အဲ့ဒီထဲကစိုက်ပျိုး ရတဲ့လယ်ယာမြေ ၁၅၂၈ ဒသမ ၃ ဧကကိုတောင်သူ ၂၅ဝ ထံလွှဲ ပြောင်းပေးအပ်ပြီးပါပြီ” ဟု တိုင်း ဒေသကြီးဝန်ကြီး ဦးဝင်းမော်ဌေးက ပြောကြားသည်။
သိမ်းဆည်းပြီးအသုံးမချသည့်မြေများကို ပြန်စွန့်လွှတ်သည့်အပြင်သိမ်းဆည်း၍အသုံး ပြုသည့်မြေများအတွက်လည်း လျော်ကြေးငွေပေးသင့်သည့်ကိစ္စများကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့်ညှိနှိုင်းပြီး လျှော်ကြေးငွေ ပေးဆောင်ခဲ့ရာ အစိုးရသက်တမ်း နှစ်နှစ်ကျော်တွင် မြေယာလျော် ကြေးငွေ ၂၅၆၅ သန်းကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ ပေးဆောင်ပြီးဖြစ်သည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ လယ်ယာမြေများနှင့်အ ခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တောင်သူများနစ်နာမှုမရှိစေရေးအတွက် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခံနေရခြင်း ပြန်လည် စိစစ်ရေးကော်မတီကိုအဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပြီးပြဿနာများကို ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်း နိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ကြောင့် ယခုကဲ့သို့လယ်ယာမြေများပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်ခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
သမိုင်းဝင် ရှာလ်ဟုမ်းခံတပ်သို့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးသွားများ အချိန်မရွေး လာရောက် လည်ပတ်နု??
မွန်ပြည်နယ် အတွင်း ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် ပိတ်ထားရသည့် ကျောင်းများအနက် အခြေခံပညာကျောင်းပေ?
အိမ်ခြေမဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ပရိသတ်တစ်ဦး အိမ်ဝယ်ဖို့ အကူအညီပေးခဲ့တဲ့ တေလာဆွစ်ဖ်
NAFTA ပျက်သွားပါက အမေရိကန် လယ်သမားတို့ များစွာ ဆုံးရှုံးရမည် ဟုဆို
ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာ တွေ့နိုင်မည့် မျိုးရင်းတိရစ္ဆာန် မျိုး?
ဝင်ငွေနည်းပြည်သူများအတွက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်ရှစ်မြို့နယ်၌ အသေးစားငွေရေြးေ??